Minyengetero ine simba yekubatana mumhuri | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero Minyengetero ine simba yekubatana mumhuri
Minyengetero ine simba yekubatana mumhuri
mhuri yakarongedzwa pachirevo chekubatana, uye Kubatana kunokwanisa kurova mhuri. Kunyangwe kana kwete vanhu vane hukama neropa kana kuroora, vanogona kuve mhuri kana paine kubatana kwechinangwa. Nenzira inonzwisisika, munamato une simba wekubatana mumhuri nekudaro unova mumwe weminamato yakakosha yekutaura kumhuri. Mhuri chinhu chakakosha pamberi pameso aMwari. Zvakawanda seizvo mhuri inogona kutaridzwa senzvimbo yemagariro, inogona kuonekwawo sechinhu chemweya.
Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo
Kana mwana akazvarwa munyika ino, havana chinamato, havana mutauro, vanozivikanwa, kana kutenda. Ndiro chete basa remhuri kurera mwana. Mhuri inopa kuzivikanwa kwemwana, chinamato, chinovabatsira kuita basa rekutenda, uye kuvapa mutauro.
Tichitarisa neizvi, izvo, saka, zvakakosha kuti mhuri yakabatana kuti iite ese aya mabasa ayo ari munharaunda uye Mwari anoda kuti vaite. Kana pasina kubatana mumhuri, hapana nzira iyo isingakanganise kurerwa kwemwana wese akazvarwa mumhuri iyoyo.
Hapana chinhu chinogutsa semhuri inomira pamwechete mukubatana. Mhando dzeichi chiito chikuru hachigone kusimbiswa. Rangarira kuti Bhaibheri rinoti mumwe achadhonza chiuru, uye vaviri vachadhonza zviuru gumi. Izvi zvakasimbisa chokwadi chekuti mhuri dzinogona kuwana zvakawanda kana dzabatanidzwa. Zvisinei, vaviri havagone kushanda pamwechete kunze kwekunge vabvumirana. Izvi zvinoreva kuti kubudirira kana kukundikana kwemhuri chero ipi zvinozoenderana nekubatana kuripo iyo mhuri kana kushomeka kwayo.
Zvinoshamisa kuti, kana mhuri dzichibatana maoko uye dzichinamata pamwechete, zvinoratidzira njodzi huru pahumambo hwerima. Mwari vanoremekedza kubatana muchinangwa, dhiabhori anozivawo izvi, ndosaka chinhu chekutanga chaanoedza kuba mumhuri mweya wekubatana.
Kunyangwe mumuviri waKristu, kana imwe neimwe chikamu chaputswa kuita zvidimbu, Dhiabhori haasati ari kure zvakanyanya kuti arove.
Bhuku raJoshua chitsauko 24 - 15 Uye kana zvichiratidzika sezvakaipa kwamuri kushumira Jehovha, zvisarudzirei nhasi wamunoda kushumira, zvimwe vamwari vaishumirwa namadzibaba enyu vaiva mhiri kwerwizi, kana vamwari yavaAmori, vamugere munyika yavo; Asi kana ndirini neimba yangu, tichashumira Ishe. Chikonzero chega Joshua aigona kutaura zvine mvumo kuti izvi zvaive nekuti kune kubatana kwechinangwa mumhuri yake.
Kubatana mumhuri yaJoshua kwakaita kuti zvive nyore kwaari kuti audze vakuru veIsreal kuti vanogona kuenda mberi uye vakazvisarudzira mumwe Mwari pachavo kana vakaona zvakaipa mukushandira Ishe. Nekudaro, kwaari uye nemhuri yake, vaizobatira Ishe.
Usatendera dhiabhori kutora chimwe chezvinhu zvikuru zvakapihwa Mwari kumhuri yako. Iwe unofanirwa kuita zvese kuchengetedza kubatana kuripo mumhuri yako. Isu takanyora runyorwa rweminamato ine simba yekubatana mumhuri kubatsira mhuri yako kuti ibatane.
Baba Ishe, ndinonyengetera kwamuri nhasi maererano nemhuri yangu. Ini ndinokumbira kuti mutidzidzise kubatana muzita raJesu.
Ini ndinouya kuzopesana neese simba nehurongwa zvingave zvinoda kuumba kusagadzikana pakati pedu; Ini ndinoparadza masimba akadaro muzita raJesu.
Ini ndinonamata Ishe kuti muitise kuti tibatane, 'muchajekesa icho chiratidzo kune mumwe nemumwe wedu, kuti isu timhanye nenzira iyoyo muzita raJesu.
Ishe Mwari, ndinonamata nerudo rwenyu rusina chirevo, tidzidzisei maitiro ekuzvida isu pachedu muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinonamata kuti muvharise kupinda kwese kuri kuvambwa nadhiabhori kukonzera kupokana mumhuri yangu. Ini ndinonamata kuti muidzivise muzita raJesu.
Ishe Mwari, ndinonamata kuti mutipe mweya wese kuti tizviriritire isu pachedu. Ndinoziva kuti isu takasiyana vanhu kunyangwe tiri vemhuri, asi ini ndinonamata kuti mupe kwatiri nyasha kuti tigone kushivirirana muzita raJesu.
Baba Tenzi, ini ndinokumbira kuti mutipe mukana neruregerero rwekuregerera pese patichayambuka mumwe nemuzita raJesu.
Ishe Jesu, nengoni dzenyu, ndinonamata kuti mudzidzise isu kunyarara kana tatsamwa, mupeiwo kutaura kana tatsamwa.
Ishe Mwari, rugwaro rwunoti imba yakapesana ichimirisana haingamire. Ini ndinouya kuzopesana nesimba rose rekuparadzanisa mumhuri yedu neropa regwayana
Baba Tenzi, Bhaibheri rinoti kunaka nekunakirwa kwakadii kuti hama dzishande muhumwe. Ini ndinokumbira kuti mutibatsire kuti tirambe tichishanda mukubatana muzita raJesu.
Ishe Mwari, hatidi kutadza chinangwa chedu semhuri, tibatsirei kumira uye tirarame murudo nekusingaperi muzita raJesu.
Ropa regwayana rinoparadza Baba Lord, chero muvengi arikuronga kushandisa sechinhu kugadzira kuvengana mumhuri medu.
Rugwaro runoti vana vangu neni tiri zviratidzo nezvishamiso, ini ndinoparadza simba rega ringave kuda kushandisa vana vangu kukonzera kusabatana mumhuri yangu, ini ndinoparadza simba rakadai muzita raJesu.
Baba, hatidi kungobatana, tinodawo kupofomadzwa nerudo rwakasimba kudaro, tinoda kubatana muhumwari, tibatsirei kuti tiite izvi nemuzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamata kuti mugadzirise vese moyo yakaputsika mumba mangu. Ini ndinokumbira kuti nengoni dzenyu, muporese kurwadziwa kwese mupfungwa mumhuri yangu, ndinonamata kuti mudzore rudo rwekutanga mwoyo yedu muzita raJesu.
Ini ndinouya kuzopesana nemweya wega wega wetsvina, godo, godo, uye shungu dzinogona kuda kugara mumoyo memitezo yemhuri yangu. Ini ndinonamata kuti muparadze muzita raJesu.
Ini ndinonamata kuti mupe vese vakarasika mumhuri yangu inyasha dzekuwana imi, vabatsirei kuwanazve nzvimbo yavo mauri muzita raJesu.
Ndinonamata Ishe Jesu kuti muite kuti mabhurawu edu ave maropafadzo kune vamwe pese pavanozviwana ivo. Vabatsire kugara vari mumiriri wakanaka wemhuri yaKristu muzita raJesu.
Ishe Mwari, ndinonamata kuti muropafadze munhu wese emhuri yangu nemoyo unozogara uine nyota shure kwako muzita raJesu.
Previous nyayaNEMINYENGETI KUNA MAMA-DAUGHTER KUSHURE
inoteveraSIMBA RINONYENGETA RENYAYA DZESVONDO DZESVO
Kurotamunonye Epelle Chivabvu 18, 2020 nenguva dza 3:53 pm
Ini ndakakomborerwa nemunamato aya. Mwari vakuropafadzei.
rufaro Chivabvu 30, 2020 Na8: 31 am
Ini ndakakomborerwa zvakanyanya neaya munamato mapoinzi. More Nyasha changamire
rufaro Chivabvu 30, 2020 Na8: 32 am
Tenda Mwari nekuda kwako changamire. Nyasha zhinji muzita raJesu. Ameni
Prince Chivabvu 31, 2020 nenguva dza 1:27 pm
Ndatenda changamire .. Iwo maprayer point ane simba uye ndakakomborerwa kuburikidza navo muzita raJesu rine simba Amen !!!
kago lucresia Chikunguru 29, 2020 At 10:40 am
Ndatenda zvikuru neminyengetero yakadaro yekubatana. Mhuri yangu ichaungana uye tova mumwe.
Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi 4th November 2018.
Kunamata Points Kuparadza Imbwa Kuruma muDoto
Dai 31, 2021
20 Minamato yeMinamato Yepfungwa Dzemweya
31 minamato minamato Yekubatsirwa Kwemari